Chiellini: Italy reyn-reyntii ayaa ka luntay – Gool FM
Ka hor kulanka Liverpool wax ka ogoow 10-ka saxiix ee ugu xumaa taarikhda kooxda Manchester United
Harry Maguire oo kalsooni xoogan ka muujiyay inay guul ka gaari karaan kooxda Liverpool
Liiska kooxaha heysta saddexda weerar ee ugu xoogan Yurub oo shaaca laga qaaday… (Man United oo ka sarreysa Liverpool)
Man City iyo Arsenal oo taako loo dhigay & guud ahaan natiijooyinka kulamadii kale ee laga ciyaaray Premier League… +SAWIRRO
Real Madrid oo guul ay u baahneyd kaga gaartay kooxda Sevilla garoonka Santiago Bernabeu… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Newcastle Iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
PSG oo ku soo biirtay loolanka xiddig bar-tilmaameed buuxa u ah kooxaha Arsenal, Tottenham iyo Bayern Munich
Bayern Munich oo kalsooni ku qabta in Lorey Sane ay dib ugu celin karto wadankiisa hooyo
Kooxaha Juventus iyo Barcelona oo wadahadallo furanaya si ay isku dhaafsadaan labo laacib
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Iyo Sevilla ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Chiellini: Italy reyn-reyntii ayaa ka luntay
Kaafi October 7, 2017
(Rome) 07 Oct 2017. Giorgio Chiellini waxa uu qabaa in taageereyaasha Italy ay sabab walba xaq ugu leeyihiin in ay ku FOORIYAAN kaddib bar bar dhicii 1-1-ka ahaa ee ay Macedonia la galeen iyo guul daraddii ka soo gaartay Spain.
Azzurri hore kulan walba wey u soo badisay kahor inta aysan guul daradda kala kulmin La Roja iyo bar bar dhaca Macedonia.
“Markii aan goolasha daah furnay, waxa ay ahayd si wacan in aan dheesha u xakameeyno, Macedonia halisba naguma hayn ilaa iyo daqiiqadii 75aad. Waxa ay ahayd in aan xakameyno,” ayuu u sheegay Rai Sport.
Waxaa cad guuldaraddii Spain in ay farxaddii saameyn ku yeelatay waxaad u baahan tahay in aad si fiican u shaqeyso oo aad uga horreyso kuwa kaa soo horjeeda. Dabcan qalad ayaan iska dhaadhicinay oo ah in aan ka hormarseyn sida ay iyagu yihiin, laakiin waxaan u baahannahay degenaan.
“Walow aysan ahayn bandhig wanaagsan, waa simbiriirixashadeenii kowaad ee is reeb reebka heerka group-yada. Waa in aan shaqada sii wadnaa, taas ayaana ah sirta, oo ay la socoto shaqsiyadda iyo xasiloonida.
“Waa mid inaga noo taal sidii aan ugu guuleysan lahaa mashxaradda taageereyaasha. Waxaan fahansannahay in ay xanaaqsan yihiin, laakiin hadda oo ay baahi jirto, wey nala jiri doonaan.”
Sacchi oo amaan kala dul dhacay Perez
KHUBURADDA TIKI TAKA: Isco oo dhaliyey Kubadd 10 ciyaaryahan ay soo taabteen
Newcastle United oo guul xilli dambe ah ka gaartay kooxda Chelsea oo marti ugu aheyd garoonka St James’ Park… +SAWIRRO